Korean mfihlo Ukuhwebelana uqale self isiqondiso umzamo - Blockchain Izindaba
Korean mfihlo Ukuhwebelana uqale self isiqondiso umzamo
cryptocurrency Ukuhwebelana ezinkulu Korea usethe imithetho zokuthuthukisa obala.
Esithangamini sabezindaba e Seoul ngoLwesibili, abaholi bama 14 mfihlo Ukuhwebelana yasekhaya kuhlanganise Bithumb, Upbit futhi OKCoin yamemezela imithetho. Ziyakwazi amalungu Korea Blockchain Association.
Inhlangano ngeke ahlole uhlelo we 14 Ukuhwebelana zifiki ayisishiyagalolunye ukuze ubone uma izinhlelo zabo ukuhlangabezana nemithetho. Nokho wokuhlola, ingase ibe nomthelela okutheni ngenxa imithetho aziwubophezeli ngokomthetho.
Amalungu okufanele athumele imibiko self-ukuhlolwa inhlangano ngomhla ka-Meyi 8. Ngasohlangothini lwalo, inhlangano uzoqala ukuzihlola amalungu ekuqaleni May 1st.
“Imithetho izidingo eziyisisekelo ngenhloso yokuqinisekisa ukuba sobala mfihlo ukuthengiselana,” kusho isikhulu inhlangano.
Blockchain Izindaba 21 Januwari 2018
Pavel Durov ucela ukusetshenziswa ...
Coincheck sifuna appr ...
Thumela Previous:ezihlobene patent Amazon amafayela mfihlo yedatha ukusakaza
Thumela Landelayo:Bitcoin ATM inethiwekhi Coinsource isebenza nge multi-factor ubuqiniso e Acuant
May 20, 2018 ngesikhathi 5:51 PM